La Yaabka Dunida: Nin ku guuleystey horyaalka foolxumada aduunka(SAWIRO) – SBC
La Yaabka Dunida: Nin ku guuleystey horyaalka foolxumada aduunka(SAWIRO)
Posted by editor on June 8, 2012 Comments
Inaad maqasho tartamo kala duwan oo dunida ka dhacaya ma ahan wax kugu cusub, tiiyoo qof kasta baadi goob iyo rucle u galo in uu magac ka tago, maal helitaanna kama marna.
Laakiin in foolxumo loo tartamo waxay ku noqonaysaa qofkii maqla qosol iyo maad, iyadoo waliba lagu faanayo oo la isku gudoonsiiyo abaalmarin ay hareer socoto kaydinta taariikhda aduunka qayb ka mid ah.
Nin u dhashay wadanka Shiinaha ayaa dhawaan abaalmarin lacageed ku helay in uu wajigiisa ka dhigo qofk aduunka ugu foosha xun, intaasi oo kaliya maba ahane ninkan waxaa lagu qoray buuga waxyaabaha la yaabka leh lagu kaydiyo ee Guinness World Record.
Ninkan oo lagu magacaabo Tang Shuquan, waa 43 sano jir in loo aqoonsado foolxumada aduunka ma ahan mid hooyadii ku dhashay balse isaga ayaa wajigiisa wuxuu ka dhigayaa wax aad ka dido ama aad wajiga ka dadabto, tiiyoo ay sii dheertahay in caruurta lagu seexin karo cabsi darteed.
Tang wuxuu u helay xirfad iyo farsamo in uu wajigiisa ka dhigo foolxumada qosol iyo cabsi kugu beerasa, waxaana uu waliba ku faanay in hadii uu soo baxo qof ka qaadan kara horyaalka foolxumada aduunka in uu qofkaasi siinayo lacag dhan 10 kun oo doolar.
Tang Shuquan oo ka soo jeeda magaalada Chengdu ee gobolka Sichuan ee dalka Shiinaha wuxuu ku faanay in rikoorkiisa iska dhiga qofka ugu wajiga fooxsha xun aanay cidina jabin karin, isagoo mudo 7 sano ah rikoorkan ku haystey dalka Shiinaha.
abdiaziz ugaasgurey says:
aad ayuu quruxlow u yahay run ahaanti lkn ninkaan malaga yaabaa cinuu xaas leeyahay haduu leeyahayne ma mid isaga u eg ayuu qabaa
khadar yare says:
ninkan illaahay ayaa saas u abuur tay fadlan ku waano qaado
cabdi shakuur says:
kan haduu xafiiska sbc soogali lahaa shaqaaluhu gaar ahaan gabdhuhu shaqada masii wadan lahaayeen ani laftaydu uma istaagee
ilaahay baa idaa u abuurtay ee yaana lal yaabin
waa abuur ale ee ku qudura qaado walaala kay giyaw
kkkkkk C/raxmaan Faroole wiilkiisa MAXAMED BUU U EGYAHAY
Ninkani ma foolxuma waa nin caadi ah laakin waxan la yaabay sida uu u jilay foolxumada shiikhaaga was waxaad moodaysaa canjeelo gubatay anigu waan naxay markii hore